I-Edelweiss ngoku ibonelela ngoQhagamshelo lweeveki ezi-2 ukusuka eZurich ukuya eTanzania
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseTanzania eziziiNdaba » I-Edelweiss ngoku ibonelela ngoQhagamshelo lweeveki ezi-2 ukusuka eZurich ukuya eTanzania
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Ukwakha kwakhona • Iindaba zaseTanzania eziziiNdaba • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel
U-Edelweiss Zurich oya eTanzania ubuliswa ngamagosa
Inqwelomoya yenqwelomoya yaseSwitzerland, u-Edelweiss, uthumele inqwelomoya yokuqala yabakhweli kwisikhululo seenqwelomoya saseKilimanjaro (i-KIA) esiya ngqo eZurich, sinika imitha yethemba kumzi-mveliso wokhenketho waseTanzania weebhiliyoni.
U-Edelweiss ubambe iAirbus A340 e-KIA ngo-Okthobha 9, 2021, elawula icandelo lezokhenketho ngenqwelomoya eTanzania.
Inqwelomoya yabuliswa ngomlomo wamanzi kunye namagosa aliqela aseTanzania.
Ukusungulwa kwe-Edelweiss kubonwa njengevoti yokuzithemba eTanzania njengendawo ekhuselekileyo yokushishina, ngakumbi ukhenketho lokuzonwabisa, ngenxa yeenkqubo zempilo nezokhuseleko ezikhoyo.
UEdelweiss, inkampani engudade weSwitzerland International Air Lines kunye nelungu leQela laseLufthansa, unabathengi abamalunga nezigidi ezingama-20 kwihlabathi liphela.
Ngo-Okthobha 9, 2021, intombi Edelweiss I-Airbus A340 ifike e-KIA, isango eliphambili kwisekethe yezokhenketho esemantla eTanzania, enabakhenkethi abangama-270 abasuka kulo lonke elaseYurophu.
Inqwelo-moya iye yamkelwa ngembumbulu yamanzi emva kokuchukumisa ngempumelelo umgaqo weenqwelo-moya we-JRO ngentsimbi yesi-8: 04 kusasa ngeXesha laseMpuma Afrika, njengaBaphathiswa beKhabinethi abajongene neMisebenzi nezoThutho kwanabo beNdalo nezoKhenketho, uNjing. Makame Mbarawa noGqirha Damas. UNdumbaro, ngokwahlukeneyo, kunye nommeli wabahlali belizwe lase Tanzania, UNks Christine Musisi; Unozakuzaku waseSwitzerland, uGqirha Didier Chassot; kunye noMphathi Jikelele weQela laseLufthansa uMazantsi ne-Mpuma ye-Afrika, uGqr. Andrea Shulz ukhokele isihlwele ukuba sivuyiswe kukufika kwenqwelomoya okwimbali.
"Ukuphehlelelwa kuka-Edelweiss yivoti yokuzithemba eTanzania njengendawo ekhuselekileyo yokushishina, ngakumbi ukhenketho lokuzonwabisa, ngenxa yemigaqo yezempilo nokhuseleko ekhoyo ukuqinisekisa ukuba uhambo lomoya luhlala lukhuselekile kwaye alusasazi iiCoronaviruses kwihlabathi liphela," utshilo uProf. Utshilo uMbarawa phakathi konwabe phantsi.
Uye wongeza wathi: "I-Edelweiss ibonelela ngendawo ebaluleke kakhulu kwisekethe yezokhenketho esemantla eTanzania kunye neyona ndawo ikhula ngokukhawuleza eYurophu kwishishini lokuhamba ngenqwelomoya kunye nezinye izixeko ezikhulu kwihlabathi liphela, siphefumla ubomi obutsha kukhenketho lwethu, eyona nto iphambili kwezoqoqosho."
Umphathiswa Wezendalo kunye nezoKhenketho, uGqr. Damas Ndumbaro, uthe i-Edelweiss ibonelela nge-2 ngeveki ukunxibelelana ukusuka eZurich, Swizalend, ukuya eTanzania ayisiyiyo nje eyokukhenketha okugulayo kodwa ikwangumqondiso ocacileyo wokuzithemba okukhulayo kushishino lokuhamba. amanyathelo e-COVID-19 eli lizwe.
I-Edelweiss izakubhabha ukusuka eZurich ukuya eKilimanjaro ukuya eZanzibar qho ngoLwesibini nangoLwesihlanu ukusukela ngoku kude kube sekupheleni kuka-Matshi. Indlela iya kusebenza nge-Airbus A340. Inqwelomoya inikezela ngezihlalo ezingama-314 zizonke-27 kuDidi lweShishini, i-76 kwi-Max Max, kunye ne-211 kuQoqosho.
UBernd Bauer, umphathi we-Edelweiss, wathi: “Njengenqwelo-moya yaseSwitzerland ehamba phambili kwezolonwabo, uEdelweiss ubalekela kwezona ndawo zintle ehlabathini. NgeKilimanjaro neZanzibar, ngoku sineendawo ezimbini zokubonelela ngeeholide, ezihambelana noluhlu lwethu kwilizwekazi laseAfrika kwaye zenza iindwendwe zethu ezivela eSwitzerland naseYurophu zikonwabele amava ohambo angalibalekiyo. ”
UDidier Chassot, ongunozakuzaku waseSwitzerland eTanzania, wavuya xa inqwelo-moya yokuqala yafika: “Siyavuya kuba inqwelo-moya yaseSwitzerland iphinde yadibanisa iSwitzerland neTanzania ngqo. Esi sigqibo sika-Edelweiss sibonisa indlela iTanzania enomtsalane - ilizwekazi kunye neZanzibar - kuhlala kubantu baseSwitzerland. Ikwabonisa ukuzithemba okukhulayo kwimizamo yeTanzania yokujongana nemiceli mngeni enxulumene nobhubhane we-COVID-19 ngesisombululo esifanelekileyo kunye nokwenza izinto elubala, esikwamkele kakhulu. ”
Uhambo oluya ngqo e-Edelweiss oluya e-KIA, phakathi kwezinye izinto, lube nakho ngenxa yobambiswano lobathathu emnye oluvela kwiNkqubo yoPhuhliso lweZizwe eziManyeneyo (i-UNDP), iTanzania Association of Tour Operators (TATO), kunye norhulumente nge-Ofisi yoMphathiswa Wezendalo kunye nezoKhenketho.
“Ndinombulelo ongazenzisiyo xa ndibona ezinye zeziqhamo zentsebenziswano kunye noMphathiswa Wezendalo kunye noKhenketho kunye neTATO ekomelezeni ukubuyela kwezokhenketho eTanzania. Siyavuyisana noRhulumente waseTanzania, iTATO, kunye neqela lolawulo laseSwissair ngomsebenzi onzima osenzileyo ukuza kuthi ga kulo mhla, ”Ummeli welizwe we-UNDP, UNks Christine Musisi, uxelele abaphulaphuli kumsitho wokwamkela iindiza.
UNks. Musisi uthe ukhumbula ukuphakama kokutshixeka kwehlabathi ngo-Epreli 2020 ngexa i-UNDP ikhokele uvavanyo lwe-UN olukhawulezileyo lwefuthe kwezentlalo noqoqosho lwe-COVID-19 ukuya eTanzania, bekucacile kolu phando ukuba ukhenketho lolona shishino lwezoqoqosho lubethekileyo. ilizwe.
Ngenxa yokwehla kweepesenti ezingama-81 kwezokhenketho, amashishini amaninzi awile okukhokelele kwilahleko enkulu yengeniso, ilahleko yekota yesithathu yemisebenzi kolu shishino, nokuba ngaba ngabatyeleli, iihotele, abakhokeli babakhenkethi, abathuthi, abathengisi bokutya kunye nabarhwebi.
Oku kuchaphazele kakubi impilo yabaninzi, ngakumbi amashishini amancinci, amancinci naphakathi, abasebenzi abangakhuselekanga, kunye namashishini angamiselekanga aquka ikakhulu ulutsha nabasetyhini.
"Sibulela iSebe leMithombo yeNdalo kunye nezoKhenketho ngokuthembela kwi-UNDP njengeqabane elisebenzisanayo ekulungiseleleni isicwangciso esibanzi sokubuyiselwa kwe-COVID-19 kunye nesicwangciso sokuzinza kwishishini lezokhenketho," ucacisile.
UNkosazana Musisi wongeze ngokukhawuleza wathi: “Sikwabulela ne-TATO ngobunkokheli babo kuthethathethwano nabathathi-nxaxheba abaninzi olukhokelele kwiprojekthi yokubuyiselwa kwezokhenketho esidibeneyo esiyenzileyo kwaye enegalelo ekuvuleni le ndlela nangamanyathelo ngamanyathelo, sisebenzela ukuvulwa ngokutsha kweemarike. eYurophu, [eMelika] nakuMbindi Mpuma. ”
"Ndiyakholelwa ukuba esi sisiqalo nje sohambo lwethu ekwakheni ngcono ishishini lezokhenketho eliquka wonke umntu, elomeleleyo nelinenkqubela phambili," uvale ngelitshoyo uNks.
Ngokwaziswa kweenqwelomoya eziphindwe kabini ngeveki nguEdelweiss, umphathi we-UNDP uthe uyathandeka ukuba iTanzania ayizukubuyisa kuphela kodwa inyuse, isabelo sentengiso yezokhenketho eYurophu nakuMntla Melika.
Umphathi we TATO, Mnumzana Sirili Akko, uvakalise umbulelo wakhe omkhulu ku Edelweiss nakwi UNDP, esithi inkxaso yabo yeza kwelona xesha limnyama kwimbali yezokhenketho yakutshanje ebangelwe ziimpembelelo zobhubhane ze-COVID-19.
Umkhenkethi, uMnu. Amer Vohora, uthe: "UEdelweiss ekugqibeleni ubuyela eTanzania lide ixesha elizayo, inqwelomoya ebhabha ngokuthe ngqo elula kakhulu kwaye intle kakhulu ngenkonzo egqibeleleyo, njengoko kuya kufuneka ndibhabhe ndibuyele rhoqo ukutyelela iEdelweiss Coffee Iindawo. Ndizakubhukisha inqwelo moya yam ukubuya kwam nje ukubuya kwam. ”